Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! महाकवि देवकोटाको ११३ औं जन्मजयन्ती मनाइयो
महाकवि देवकोटाको ११३ औं जन्मजयन्ती मनाइयो
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११३ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा बुधवार ‘व्यक्तित्व चर्चा र रचनावाचन कार्यक्रम’को आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रम सुरु हुनुअगि प्रज्ञा परिसरमा अवस्थित महाकवि देवकोटाको प्रतिमामा कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती, सदस्य सचिव प्रा. जगत्प्रसाद उपाध्याय, प्राज्ञ परिषद्का सदस्यहरू, महाकवि देवकोटापुत्र प्रा.डा. पद्मप्रसाद देवकोटा, पुत्री अम्बिकादेवी रिमाल लगायतले माल्यर्पण तथा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी महाकविप्रति श्रद्धासमुन अर्पण गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १८, २०७८, १४:२२:००